Wararka - Birta corten ma la isticmaali karaa?
Birta Corten ama Cimilada Hawada waa nooc gaar ah oo silsilado bir ah oo hooseeya oo u dhexeeya birta birta ah iyo birta kaarboon caadiga ah. Waxay leedahay iska caabin daxalka hawada iyo muuqaalka muuqaalka marka loo eego birta kaarboon caadiga ah, qiimaha waa ka dhaqaale badan yahay birta birta ah.
Saxanka 'corten steel' waa mid ka mid ah xaashiyaha bir, sidaa darteedna waa la isticmaali karaa. Joogtada ah walxaha birta ah ee loo yaqaan 'corten steel' waxaa loo samayn karaa qaabab saddex-geesood ah, sida laba jibbaaran, saddex-xagal, leydi, oval iwm. Nashqadeyntaani waxay ku tusi kartaa muuqaalka farshaxanka corten si ka wanaagsan oo waxaan sameyn karnaa qaab kasta marka aad noo xaqiijiso nacasyadaada.
Farshaxanadan daxalaystay waxaa la hayn karaa in ka badan boqollaal sano. Sababta ugu weyn ayaa ah ka dib soo-gaadhista jawiga bannaanka ee dabiiciga ah, dusha sare ee birta waxay si otomaatig ah u samaysan doontaa lakab ka-hortag-wasakh ah marka lagu xidho hawada ama biyaha roobka iwm. Waa xulasho wanaagsan in lagu qurxiyo bannaanka banaanka, miyaanu ahayn?
Waxaan u sameynay qaar ka mid ah mashruucyada dibedda macaamiisha dibedda ka hor inta badana waxaan u isticmaalnaa birta "corten steel" wax muhiim ah. Dhanka kale waxaan sidoo kale ka been abuurnay farshaxanno badan oo farshaxan oo bir ah oo loogu talagalay farshaxanka maxalliga ah ama naqshadeeye, kaasoo ka mid ah farshaxannada caanka ah ee Shiinaha. Sawirka gacmeedkeena gacanta ayaa aad looga jecel yahay gudaha iyo dibedda.
Dhamaan warshadeena waxay taageeri karaan OEM iyo ODM dhammaan noocyada farshaxanimada. Waxaan leenahay koox naqshadeyn heer sare ah oo buuxisa shuruudahaaga. Waxaan si toos ah wax ugu soo saareynaa goos goos gooska mana jiro nin dhexe. Marka Waxaan kuu soo bandhigi karnaa qiimaha tartan iyo macquul ah had iyo jeer.
Cinwaanka Xafiiska: QOLKA 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Taleefanka Tooska ah: + 86-592-5970572
Fakis: + 86-592-5532472
Waqtiga boostada: Jul-05-2020